Wonderboot 2012 LiveShare site Glor
Nke a bụ ihe nnọọ ịrịba omume !! M nnọọ nọrọ ndị kasị mma ego mgbe a na software. The software bụ onye ọrụ enyi na enyi. Ọ maa na-arụ ọrụ maka m. My Windows Winload.exe faịlụ ọkọdọ-ehichapụ ruru ka a software nwụnye. Mgbe ọtụtụ awa nke na-agbalị ihe, na-achọ ihe aka na net enwetawara m na mberede, m bụ gọziri ka abịa gafee Wondershare na saịtị weebụ. Adịghị m a kọmputa whiz Otú ọ dị, m jisiri ike na-kọmputa m azụ elu na-agba ọsọ n'oge na-adịghị (bụghị banyere zọpụta ọma karịrị $ 100 site na iji ha software). People, m ike ikwu na-enye ngwaahịa a a na-agbalị! Ma mụ onwe m, m na-eche na ọ bụ ịrịba. M ga-adịghị ala azụ ịzụta ọ bụla nke ha na ngwaahịa mgbe na-agbalị nke a. Daalụ Wondershare! Ị na-azọpụta m sanity!
nnọọ mfe na powerfull site MINTU Krishna
M na-eji ya maka ọtụtụ nsogbu m na-aga nke ọma. Ekele Wondershare na Mmepụta si otu.
Fantastic site Giusi
Nke a na usoro nyeere m aka naghachi m rapaara laptọọpụ na ọ bụ nnọọ mfe iji. M na-achọ, e nwere otu version maka Windows 8! Ma ekele gị na ị magburu onwe usoro.
Fantastic! Site Besfort
Dị ka a software mmebe m na-eji ngwaahịa a ka buut m Llaptop na ọ zọpụtara ndụ m ha ha n'ezie, ọ! Daalụ nke ukwuu
Liveboot soooooo ọma site Rob
Mmanu Liveboot maka oge mbụ ngwá ọrụ magburu onwe
Wondershare LiveBoot 2012 Review site Reza
nnọọ elu mma mmemme
Nice Job site Matej
Dị ka a Computer Engineer, m na-agbalị idozi m na-abụghị bootable laptọọpụ-enweghị ihe ịga nke ọma. Mgbe na-agbalị ọtụtụ buut discs, mgbake discs na windows discs, ọ dịghị onye n'ime ha ga-esi m Vista laptọọpụ elu na-agba ọsọ ... ma e wezụga gị ụmụ okorobịa
Computer Guru site Jack Vanders
M ga-esi na-arịọ oge niile idozi iche iche kọmputa. M ji nile di iche iche nke buut diski, utilities, buut oru, nkebi oru wdg wdg a bụ nke mbụ omume na n'ezie na jisiri idozi pc n'ime nkeji 10. M kwadoo ihe niile iji jide n'aka na - nkwado ndabere na mpaghara were 6 awa, na mgbe ahụ 10 nkeji maka wondershare ndụ buut. My ahịa bụ azụ na azụmahịa, ekele maka oké ngwaahịa.
Amamiihe site Darren
Dị ka a Computer Engineer, m na-agbalị idozi m na-abụghị bootable laptọọpụ-enweghị ihe ịga nke ọma. Mgbe na-agbalị ọtụtụ buut discs, mgbake discs na windows discs, ọ dịghị onye n'ime ha ga-esi m Vista laptọọpụ elu na-agba ọsọ. M dị ihe nye na-re-wụnye Windows ọzọ mgbe m na-agụ banyere LiveBoot 2012 na kpebiri diski. N'ụzọ dị ịtụnanya, ọ ofu m na laptọọpụ n'ime nkeji. Amamiihe mpempe software na-atụ aro maka kọmputa injinia na n'ụlọ ọrụ myiri :)
Nnọọ Ịtụnanya Software site Marc Ellis
Mgbe ruru 5 aka elekere nke ịgụ ọtụtụ blọọgụ / support ụlọ / forums na ihe na-eme ka m na laptọọpụ \_ 's sistemụ arụnyere - m bịara ọgwụgwụ na m ga-reinstall bụghị nanị Windows 8 (m sistemụ) ma nwekwara Windows 7 ka m zụrụ mmegolite software na na-enweghị a diski ya ga-abụ a ogologo excercise. Mgbe ahụ, m wee gafee LiveBoot software na n'ihi price m akwụ ụgwọ, ọ bụ n'ezie kwe ọnụ ahịa. Na-arụ ọrụ kpọmkwem dị ka ntụziaka kwuru na ọ ga na m nnọọ ụtọ m hụrụ nke a software !!!!